Raadi tifaftireyaasha Shadows
Vol. 13 Maya 1
Vol. 13 Maya 2
Vol. 13 Maya 3
Vol. 13 Maya 4
Vol. 13 Maya 5
Vol. 13 APRIL, 1911. No. 1
SIDEE qarsoon iyo wax caam ah shay waa hadh. Hoosyadu waxay na wareeriyaan sidii dhallaanka waayo-aragnimadeena hore ee adduunkan; hadhka ayaa noola socda socodkeena nolosha; hadhwanaagna wuu jiraa markaan ka tagno adduunkan. Khibradeena hooska ayaa bilaabaneysa isla markii aan nimid jawiga adduunka oo aan aragnay dhulka. In kasta oo aan si dhakhso leh u maarayn karno nafsadeena inaan naqaanno waxa hadhku yahay, haddana in yar oo innaga mid ah ayaa baaris buuxda siisay.
Markii aan nahay dhallaanka waxaan ku seexan jirnay qolyadeenna waxaanna daawanay oo aan la yaabnay hooska lagu tuuray saqafka ama darbiga dadkoo dhaqaaqaya qolka. Hoosyadaasi waxay ahaayeen kuwa la yaab leh oo la yaab leh, ilaa aan dhibaatada u xalino maskaxdayada yar ee yar iyadoo aan ogaanayno in dhaqdhaqaaqa hadhku uu ku tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa qofka muuqaalkiisa iyo hooskiisa uu yahay, ama dhaqdhaqaaqa iftiinka taas oo ka dhigtay mid muuqata. Weli waxay u baahneyd fiirsasho iyo dib-u-eegis si loo ogaado in hadhku ugu weyn yahay marka u dhow iftiinka uguna fog yahay darbiga, iyo in uu ahaa kii ugu yaraa uguna yaraa markii uu ka fog yahay iftiinka una dhawaa darbiga. Goor dambe, markii aan caruur nahay, waxaa naloogu riyaaqay bakaylaha, jiirka, riyaha, iyo hadhka kale ee uu saaxiibkaa soo saaray kadhigistiisa farsamo gacmeedkiisa. Markii aan sii gabownay, dib dambe uguma madaddaalinayn ciyaar ciyaarista noocan oo kale ah. Hoosku weli waa qariib, waxayaabaha qarsoon ee ku xeeranna way sii jiri doonaan ilaa aan ka ogaanno noocyada kala duwan ee hadhka; waxa hadhkoodu yahay, iyo waxa ay yihiin.
Casharrada hooska ee ilmanimada ayaa ina baraya laba ka mid ah sharciyada hooska. Dhaqdhaqaaqa iyo beddelaadda hadhka dhulkooda ayaa ku kala duwan iftiinka loo arko iyo shay waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Hoosyadu waa weyn ama yar yihiin sida kuwa tuuraya way ka fog yihiin ama u dhow yihiin garoonka oo hadhka lagu arko.
Waxaa laga yaabaa inaan hadda illoobay xaqiiqooyinkan maadaama aan illownay casharro muhiim ah oo badan oo carruurnimada ah; Laakiin, haddii markaa la bartay, muhiimadooda iyo runnimadooda ayaa sannado dambe na soo booqan doonta, markaan ogaan doonno in hoosyaalladeennu is beddeleen.
Waxa jira, waxa laga yaabaa hadda in aynu nidhaahno, afar arrimood oo lagama maarmaan u ah daadinta hooska: Marka hore, shayga ama shayga dhex taagan; labaad, nalka, oo muujiya muuqda; saddexaad, hooska; iyo, afraad, duurka ama shaashadda hadhka lagu arko. Tani waxay umuuqataa mid fudud oo ku filan. Markii naloo sheegay in hoosku yahay uun dulucda shay kasta oo dabiici ah oo duuduuban shucaaca iftiinka ee ku dhaca dushaas, sharraxa wuxuu umuuqdaa mid aad u fudud oo si fudud loo fahmi karo inuu sameeyo baaritaan dheeraad ah oo aan loo baahnayn. Laakiin sharraxaadaha noocan oo kale ah, inay run yihiin inkasta oo ay ahaan karaan, haddana iskumid kama dhergaan dareenka iyo fahamka. Hoosku wuxuu leeyahay astaamo jireed oo gaar ah. Hoosku waa ka sii sharraxan yahay shay daboolka celiya. Waxay u soo saartaa saameyno gaar ah dareenka waxayna si xun maskaxda ugu dhacdaa.
Dhamaan jidhka loo yaqaan opaque waxay keeni doonaan hooskii inay dhacaan marka ay hor taagan yihiin halka iftiinka ka soo baxa; laakiin nooca hadhka iyo waxyeelada ay soo saartaa way ku kala duwan yihiin iftiinka sameeya hooska. Hadhka hooska iftiinka qorraxda iyo saameyntooda ayaa ka duwan hooskii ay sababtay iftiinka dayaxa. Iftiinka xiddigaha ayaa soo saaray saameyn kale. Hoosooyinka ay ku tuuraan laambada, gaaska, iftiinka korontada ama meel walbo oo macmal ah way ku kala duwan yihiin dabeecadooda, in kastoo farqiga kaliya ee u muuqda aragga uu yahay weynaanta ama kala duwanaanshaha muuqaalka shayga dusha sare ee hooska ayaa loo tuuraa.
Ma jiro shay jidh ahaaneed oo laraacaya iyada oo loo arko inay khaldan tahay ama joojiso iftiinka oo dhan. Jirkasta oo jirka ahi wuxuu gooyaa ama gooyaa qayb ka mid ah raysyada iftiinka una gudbiya ama u arkaa iftiinka kale.
Hoosku maahan maqnaanshaha iftiinka ee dulucda shayga oo xirtey. Hoosku waa shay laftiisa. Hoosku waa shay ka badan silhouette. Hooska ayaa ka badan maqnaanshaha iftiinka. Hoosku waa saadaasha shayga oo lagu daro iftiinka kaas oo la saadaalinayo. Hoosku waa saadaasha nuqul, isbarbardhiga, labajibbaara, ama cirfiidka sheyga la saadaaliyay. Waxaa jira shay shanaad oo lagama maarmaan u ah sababaha hooska. Qodobka shanaad waa hooska.
Markaan eegno hooska waxaan aragnaa dulucda shayga la saadaaliyay, dusha sare oo xirta hooska. Laakiin ma aragno hadhka. Hooska saxda ah iyo hooska dhabta ah ma ahan qaab kooban. Hadhku waa saadaasha hooska gudaha iyo sidoo kale muuqaalka jirka. Jirka gudaha lama arki karo sababta oo ah isha looma dareemayo fallaaraha iftiinka ee la socda jirka gudihiisa oo sameysanaya hooskiisa. Dhammaan hooska ama hooska lagu garan karo isha waa dulucda iftiinka oo keliya, oo ishu ku habboon tahay. Laakiin haddii aragga la tababbaray, wax arkihiyuhu wuu garan karaa waxa gudaha jidhkiisa ah oo dhan xubnahiisa hooskiisa, maxaa yeelay iftiinka jidhka dhex marayaa waa mid la yaab leh oo qaadaya nuqul ka mid ah qaybaha jidhka oo dhan way gudubtaa. Dusha muuqaalka kore ee uu hadhka lagu arko, taasi micnaheedu waa, oo sababa muuqaalka iftiinka ee qaabka jirka in la arko, ayaa ku dhajiyay nuqul ah hooska, oo ay saameyso hooska illaa shahaadada ay ku siijirto aragtida dheer kadib jirka ama nalka gubanaya.
Haddii saqafka dushiisa lagu dareemo iftiinka iftiinka ee ka gudbiya jirka loo yaqaan opaque oo hoos u tuur, dusha sare waxay lahaaneysaa aragtida ama hooska, waxayna u suurtoobi kartaa qof aragga u tababaran inuu arko ma aha oo keliya dulucda. Jaantuska, laakiin si loo sharaxo loona falanqeeyo gudaha asalka ah ee hooskaas. Waa suurta gal in la garto xaaladda jidhka nool waqtiga aragtida hooska isla markaana saadaal laga bixiyo mustaqbalka cudurrada ama caafimaadka iyadoo la raacayo ogaanshaha cudurka. Laakiin saxan ama dusha sare ookordhaqeysa muuqaalka hooska sida ay u aragto muuqaalka jirka ee caadiga ah. Waxa loogu yeero hooska, marka laga eego dhinaca muuqaal ahaaneed, waxay soo saartaa saameyno gaar ah, laakiin kuwan lama arkin.